वीरगंजलाई प्रादेशिक राजधानी नबनाए बारा, पर्सा, रौतहट टुक्रिन्छ : पूर्व सांसद गुप्ता
भदौ ३, २०७६ बलिराम यादव
राजकुमार गुप्ता मध्य तराईका राजनीनीतिकर्मी बीच नयाँ नाम पक्कै पनि होइन । पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका वडा नं. ७ फूलकौल टोलमा वि.स. २०२७ चैत्र २० गते जन्मिएका गुप्ता पछिल्लो समयमा राजनीतिमा सक्रिय छन् । २०७० सालको दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा पर्सा क्षेत्र नं. ३ बाट निर्वाचित भई संविधान सभा सदस्य रही सकेका छन् । स्व. हिरालाल प्रसाद तथा शान्ति देवीका ४ छोराहरु मध्येका जेठो छोरा हुन् गुप्ता । २०४२ सालमा कक्षा ९ मा अध्ययन गर्ने समयदेखि नै तत्कालिन अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनबाट राजनीतिमा होमिएका पूर्वसांसद गुप्ता ठाकुरराम बहुमुखी क्यामपसबाट राजनीति गर्दा गर्दै स्नातक तह. सम्मको अध्ययन पुरा गरिसकेको बताउँछन् । पछिल्लो समयमा प्रदेश नं. २ को राजधानी जनकपुर तोक्ने कुरा उठ्दा वीरगंजलाई नै प्रादेशिक राजधानी बनाउनु पर्छ भनी मांग गर्दै पर्सा, बारा, रौतहत लगायतका विभिन्न पार्टीका राजनीति दलका प्रतिनीधिहरु सम्मिलित वीरगंज संघर्ष समितिको सह–संयोजक समेत हुन् गुप्ता । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकिकरणको पश्चात जिल्ला सदस्य समेत रहेका उनै गुप्तासँग वर्तमान समसामयिक राजनीतिक बिषयमा गरिएको कुराकानी :
१) वर्तमान समयमा मुलुकको राजनीति अवस्थालाई कसरी विशलेषण गर्नु भएको छ ?
वर्तमान समयको राजनीति विकासको दिशातर्फ अगाडी बढ्दै छ । विकासको गतिको तिब्रतासंगसंगै भौतिक निर्माणदेखि विभिन्न योजना, परियोजनाको काम दृत गतिमा अगाडी बढेको छ ।
२) वर्तमान सरकार बहुमतको सरकार हुँदा हुदै पनि जनचाहना अनुसार खासै काम नगरेको आरोप लागेको छ नि ?
यो जनताको आरोप होइन, प्रतिपक्षि दलको आरोप हो । प्रतिपक्षि दलको हिसाबले यो सरकार काम गरिरहेको छैन । यो सरकारले दलगत राजनीतिभन्दा माथि मुलुकलाई दिर्घकालिन विकासको दिशातर्फ उन्मुख गराउन जनचाहना अनुसार नै विकासको कामलाई अगाडी बढाइरहेको छ ।
३) यो सरकार पनि भ्रष्टाचार मै लिप्त छ भन्ने जनताको पनि गुनासो सुन्नु भएको छैन ?
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काममा सरकार लागि परेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागी अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान सक्रिय भएर काम गरिरहेको छ । भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही गर्ने काम धमाधम अगाडी बढाएको छ । अब सरकार माथिको भ्रष्टाचारको सवालमा यस्तो सरकार नेपालकै ईतिहासमा अहिलेसम्म बनेकै थिएन । जति इमन्दारी पूर्वक अहिलेका मन्त्रीहरु काम गरिरहेका छन्, त्यति विगतको दिनमा भएका मन्त्रीहरुले गरेका थिएनन् । नेपाली कांग्रेसको सरकारको पालाको मन्त्रीहरुको ुकच्चा चिाु खेलेर हेर्दा मात्र थाहा हुन्छ कि वर्तमान सरकार ठिक कि विगतको सरकार ?
४) भ्रष्टाचार न्यूनिकरण हुन नसक्नुको कारण के होला ?
विगतको दिनमा मुलुकमा स्थायी सरकार हुदैनथ्यो । ४÷६ महिना मै सरकार हेरफेर हुने अस्थायी सरकार हुन्थ्यो । र यहाँ स्थायी रुपमा (ब्युरोक्रेटस) शासकहरुले नै शासन चलाउँदै आइरहेका थिए ।
शासकहरुको मनोबल यति न उच्च छ कि भ्रष्टाचार रुक्ने स्थिति छैन । अहिले प्रत्येक दिनको समाचारमा एउटा भ्रष्टाचारी अख्तियारद्वारा पक्राउ परेको सामाचार आइ नै रहेको छ । यो स्थितिले विगतको दिनमा कर्मचारी तन्त्र जुन हाबी भएको थियो । त्यसले गर्दा भ्रष्टाचार बढ्यो । वर्तमान सरकारले शेरबहादुर देउवाको सरकार भएको पालामा लुकाइएको घेटाला जस्तैः ललिता निवास बालुवाटार जग्गाको प्रकरणः वर्तमान सरकारले खोतलेर सबैलाई भित्र हालिरहेको छ । मुलुकको जुन सार्वजनिक जग्गा जमिन लगायतको ठाउँमा भएको भ्रष्टाचारलाई आंकलन गरेर सरकारले एउटा आयोग गठन गरी धमाधम कार्वाही अगाडी बढाइरहेको छ ।
५) प्रदेश नं. २ को राजधानी जनकपुरमा नै बनाउने कुरा चलिरहेको छ नि ? तपाई वीरगंज प्रादेशिक राजधानीको लागि संघर्ष समितिको उप–संयोजक हुनुहुन्छ, अब यहा“को भूमिका के हुन्छ ?
बारा, पर्सा र रौतहट जिल्लाका सबै जनता वीरगंज मै राजधानी हुने पक्षमा छन् । त्यसमा एमाले, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी र राजपा पार्टीका प्रायः नेताहरुको पनि सहमति छ ।
वीरगंजलाई नै राजधानी बनाउन हामीले वीरगंज संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गरेका थियांै । त्यो बेला प्रदेश सरकारबाट माननीय जितेन्द्र सोनलको नेतृृत्वमा टोलीमा बार्ता भयो र उहाँले वीरगंज नैै प्रादेशिक राजधानी हुन्छ भन्ने आश्वासन पनि दिनु भएको थियो । अर्काे विगतको दिनमा मधेश आन्दोलन भएको बेलामा पनि प्रादेशिक राजधानी वीरगंज नै हुन्छ भने मधेशी दलका शिर्ष नेताहरु सार्वजनिक रुपमै भनेका थिए । त्यसकारण बारा, पर्सा, रौतहटका जनता आन्दोलित छ ।
वीरगंजभन्दा जनकपुर कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त छैन । त्यसकारण प्रादेशिक राजधानी वीरगंज नै हुनु पर्छ ।
६) विगतको आन्दोलन के कारणले उचाईमा पुग्न सकेन ? बल नपुगे े कै हो त ?
प्रदेशबाट आएको टोलीले बार्ताबाट नै समाधान खोजौ र केही दिन आन्दोलनलाई स्थगीत गरौं भने प्रस्ताव प्रदेशबाट आयो । अर्काे त्यो बेला मधेशको ठूलो चाडपर्व मध्येको फागु पर्व पनि थियो । तसर्थः प्रदेश सरकारको आश्वासन र चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै केही दिनको लागी आन्दोलनलाई स्थगित गरेका थियौ । आन्दोलन सकिएको होइन ।
७) के कारणले जनकपुरभन्दा वीरगंज नै राजधानीको लागी उपयुक्त छ ?
आजको दिनमा पनि जनकपुरमा सांसदहरुलाई बस्ने डेरा पाउँदैन, बस्ने घर छैन । तर वीरगंजमा भौतिपूर्वाधार लगायत देशकै सबैभन्दा गेटवे अफ नेपाल, आर्थिक नगरी तथा विभिन्न उद्योग, कलकारखानादेखि व्यापक स्रोत साधनको व्यवस्था उपयुक्त भएकोले र मधेशको अधिकारको लागी सबैभन्दा बढि संघर्ष र बलिदानी वीरगंजले नै दिएकोले प्रादेशिक राजधानी वीरगंज नै हुनुपर्छ ।
८) मुलुकमा यहा“कै पार्टीको सरकार छ, संघर्ष वाहेक अर्को विकल्प छैन ?
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशको राजधानी प्रदेश सरकारले नै तोक्ने अधिकार छ । र यो प्रदेशमा हाम्रो पार्टीको सरकार छैन, केन्द्रमा छ । केन्द्र सरकारले प्रदेश राजधानीको सवालमा केही हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा अस्थायी राजधानी तोक्ने बेलामा नै प्रदेश नं. २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरलाई नै तोकियो । यो नेपाली कांग्रेसको सरकारकै बदमासी हो, जुन पीडा अहिले हामी भोगिरहेका छौं । अर्काे मधेश आन्दोलनको ६ महिनाको अवधिलाई सम्झिदा पसिना छुट्छ, रौ खडा हुन्छ । जुन संघर्ष र बलिदानी दियौं । त्यो के को लागी ? राजधानी कै लागी नि । तर आन्दोलनको बेला वीरगंजबाट रोटी सेकेकाहरु राजधानीको विषयमा मौन भएर बसेका छन् र जनकपुरलाई बनाउने षडयन्त्रमा लागेका छन् ।
९) प्रायः दलका शीर्ष नेताहरु कै दबाबले राजधानी जनकपुर मै बन्न लागेको कुरा पनि बाहिरिएको छ नि ? के पार्टीको विरोधमा यहा“हरु जान तयार हुनुहुन्छ ?
हाम्रो पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष प्रभु साहले वीरगंज नै प्रादेशिक राजधानी हुन्छ भने सार्वजनिक रुपमै भनिसक्नु भएको छ ।
राजधानीको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको बेलामा पनि हाम्रो पार्टीका वरिष्ट नेता एंव पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले पनि वीरगंजलाई नै राजधानी बनाउने पत्रकार सम्मेलनमा नै भनिसक्नु भएको छ । अरु पार्टीको त म भन्दिन । तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी वीरगंजलाई नै प्रादेशिक राजधानी बनाउनमा लागेको छ ।
१०) प्रादेशिक राजधानी वीरगंजलाई नै बनाउन प्रदेश सरकारको बिरोधमा सडक संघर्ष वा आन्दोलन गर्न सक्नु हुन्छ ?
मुलतः ८ जिल्लाको प्रदेश काट्ने बेलामा नै त्रुटि भएको छ । संघीयता भनेको हिस्सेदारी हो । जल, जमिन, जंगल तिनवटैमा भाग देउ भन्ने हाम्रो मांग थियो । सिन्धुलीदेखि हेटौडा, मकवानपुरलाई जोडेर यो प्रदेश बनाउन पथ्र्यो । यसले यो प्रदेशमा जंगल, जमिन र पानी पनि हुन्थ्यो ।
अहिले बनेको प्रदेशमा न त जंगल छ, न त पानी, न जमिनै छ । खाली धान मात्र रोपेर त यो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सक्दैनौ नी ? अथवा अर्काे एउटा संस्कृति ठाउँ जनकपुर रहेको छ । तर त्यहाँको भेटीले त प्रदेश चल्दैन नी । अहिले त प्रादेशिक राजधानी वीरगंज हुनुपर्ने मांग मात्र हो । यदि यो सुनुवार्ई भएन भने भोलीको दिनमा कठोर कदम चाल्न बाध्य भई यो प्रदेशबाट छुटेर पर्सा, बारा रौतहटका जनता प्रदेश नं.३ मा नै मिसेर विकास र समृद्धिको बाटोमा जान तयार हुन्छन् र छन् पनि ।
११) अहिलेको स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको कामकाजबाट यहा“ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
स्थानीय र प्रदेश दुबै सरकारले काम गरिरहेको छ । नयाँ संविधान बनेपछि नयाँ तरिकाले विकास निर्माणका नयाँ तरिकाले अगाडी बढिरहेको छ । स्थानीय र प्रदेश नयाँ सरकार भएकोले कामकाजमा कहि कहि चुकेको देखिन्छ । विस्तारै सुध्रिएर अवस्था राम्रो हुदै जान्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा स्थानीय र प्रदेश सरकारको कामकाज सन्तोष जनक नै छ ।
हामी जुन गाउँमा ग्रेबलको सपना देख्थ्यौ त्यो ठाउँमा अहिले पिच र ढलान भईरहेको छ । जुन अवस्था पहिले थिएन । पहिला सांसदले क्षेत्रको विकासको पुल, सडकको लागी संसदमा आवाज उठाउनु पथ्र्यो । तर अहिले गाउँ गाउँ मै सिंह दरबार आएको छ र सबै काम स्थानीय जनताहरुको नजिक रहने स्थानीय सरकारले गरिरहेको छ । केही किचलो हुने गरेको सुनिन्छ तर विस्तारै सुध्र्रिदै जान्छ ।
१२) के के गर्नु पथ्र्याे जस्तो लाग्छ ?
सडक र नाला नै मुख्य विकास हो । यसको विकास भयो भने ६० पंतिशत विकास सम्पन्न हुन्छ । त्यसपछि बाँकीको योजना परियोजना अनुसार विभिन्न विकासको काम अगाडी बढ्छ । अहिले स्थानीय सरकारले सडक र नालाको विकास कार्यलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको छ । तसर्थः सडक, नालासंगसंगै यो प्रदेशका अधिकांश मासिन कृषि पेशामा आबद्ध भएको र कृषिमा नै यो प्रदेश आधारित भएकोले कृषि सम्बन्धित क्षेत्रमा पनि विकास गरी कृषि उत्पादनलाई बढाउने कार्यतिर पनि लाग्नु पर्छ ।
१३) अहिलेको आधुनिकतासंगै कृषकले कम लगानी मैै बढि उत्पादन गर्न सक्ने नया“ प्रविधि आवश्यक पनि पर्ला नी ?
अहिले सबैभन्दा बढि प्रथामिकता सरकारले कृषिमा नै दिएको छ । आधुनिकतासंगै थुप्रै उपकरण सरकारले दिने सेवा सहुलियत संघीय र प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ ।
पहिला एउटा हलो र दुईटा गोरु (बयल) हुन्थ्यो । त्यसैबाट खेत जोतेर खेती गर्ने गथ्र्र्यांै । तर अहिलेको आधुनिकतासंगै धान काट्ने, दाउँने, रोप्ने वा सिचाई गर्ने जस्ता काम विभिन्न उपकरण भित्रिएर हप्ता दिनमा हुने काम एक दिनमा र एक दिनमा हुने काम घण्टैमा भईरहेको छ । कृषिमा विकास भईरहेको छ । तर नेपाल कृषि प्रधान देश भनिए पनि जुन हिसाबले कृषिमा विकास भई उत्पादन आउनु पर्ने हो, त्यो भने अझै आएको छैन ।
१४) तपाई पनि पदमा रह“दा आफ्नो क्षेत्रको खासै काम नगरेको गुनासो सुनिन्छ नि ? यसलाई यहा“ले के भन्नु हुन्छ ?
मेरो कार्यकाल साढे तीन वर्ष मात्रै रह्यो । त्यो बेला सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी संविधान बनाउनु थियो । त्यो भन्दा अगाडी २०६४ सालमा पहिलो संविधान सभाको चुनाव भएको थियो । त्यो बेला ६ वर्षसम्म संविधान सभा कायमै रहयो । तर पनि संविधान बन्न सकेन ।
हामी चुनावमा जितेपछि एक वर्षभित्र संविधान बनाउने वाँचा गरेका थियौ । र लगभग हामीले १३/१४ महिनामा संविधान बनायौ । जुन धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो, र त्यही संविधानलाई टेकेर अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकारले विकासको कामलाई तिब्र गतिमा अगाडी बढाईरहेका छन् । अर्काे कुरा विकास निर्माणको लागी हाम्रै पालामा संसदीय कोष १० लाखबाट बढेर ३÷४ करोडसम्म पुग्यो । त्यो माटो पुरी सडक बनाउने काम ग¥यो । अहिले २ नं क्षेत्रमा पर्ने हरपुरदेखि बडनियारसम्मको कालोपत्रे सडक ५ करोडको बजेटमा मैले नै गराएको हुँ ।
१५) पर्सा जिल्ला विकासको मामलामा सुस्त हुनुको कारण के हो ?
एउटै व्यक्ति बारम्बर निर्वाचित भई केन्द्र्रिय कार्य समितिको सदस्य देखि ३ पटक क्याबिनेट मन्त्री भएर पनि धेरै नै सन्तोषजनक विकास हुन सकेन । पर्सा क्षेत्र नं. ३ को पदम रोडभन्दा दक्षिण तिर अलि ठिक छ । तर उत्तरतर्फ भन्ने विकास नामको ‘व’ पनि भएको छैन ।
एउटा कलभर्ट र एउटा माटो पुरी सडकको पनि विकास भएको छैन । जो बारम्बार निर्वाचित भए उनले आफ्नो क्षेत्रमा ध्यान दिएनन् । उनकै पार्टीको पटक पटक सरकार पनि बन्यो र पटक पटक उनी मन्त्री पनि भए । तर क्षेत्रमा कम ध्यान दिएर अन्यत्र बढि दिनु भयो । त्यसकारण विकास हुन सकेन ।
#पूर्व सांसद राजकुमार गुप्ता
मगलवार, भदौ ३, २०७६, १०:०८:००
निसन्तान दम्पती समयमै उपचार गराए सन्तान सुख सम्भव : डा. प्रिती यादव
साहित्यकारको लागि साहित्य नै जीवन हो : कोषाध्यक्ष सरु
लकडाउनमा घरेलु बालश्रम बढेको छ ! बाल अधिकारकर्मी जया साह
वर्तमान अवस्थामा स्वःजागरण प्रमुख कुरा हो : प्रहरी उपरिक्षक गंगा पन्त जिम्मेवार प्रहरी, लकडाउनमा किन विवादित !
जेठ २५, २०७७ बलिराम यादव
आफुमै रमाउने सुनौलो अवसरलाइ नगुमाऔ : प्रशिक्षक सुधा यस्तो समयमा हामीले आफूलाई तनाव मुक्त बनाउनु पर्छ
जेठ २०, २०७७ बलिराम यादव